Mmelite OneDrive ga-eme ka ikekọrịta faịlụ dị obere ihe mgbu
Mmelite OneDrive ga-eme ka ikesa faịlụ na-adịchaghị ewute ya
Ịkekọrịta faịlụ sitere na OneDrive ga-adị mfe na ngwa ngwa n'oge na-adịghị anya, dịka Microsoft na-arụ ọrụ ugbu a na mmelite ọhụrụ maka ọrụ nchekwa igwe ojii ya.
Dị ka akwụkwọ akụkọ na Microsoft 365 roadmap si kwuo, nnukwu ngwanrọ ahụ ga-ahapụ ndị ọrụ ka ha tinye ma mezie ọba akwụkwọ nkekọrịta. Mgbe njirimara ọhụrụ a dị n'ọnwa na-abịa, ọ ga-adịrị ndị ọrụ mfe ijikwa ndepụta ebe ha nwetara ma ọ bụ mepee faịlụ na nso nso a.
Ndị ọrụ OneDrive ga-adịrị ha mfe iburu ebe ha kwụsịrị ka ha nwere ike tinye ọba akwụkwọ ha na-ejikarị emekọrịta ihe na menu n'akụkụ aka ekpe.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu mmelite, ọ nwere ike ịba uru karịsịa maka ndị na-adabere na ngwa ọrụ mmekorita Microsoft na ngwanrọ ụlọ ọrụ dịka akụkụ nke usoro ọrụ ha kwa ụbọchị, n'ihi na ha agaghị egbu oge na-agbalị ịchọta otu faịlụ ma ọ bụ ọbá akwụkwọ na-ekekọrịta. .
Tinye na ụzọ mkpirisi OneDrive
N'edemede dị iche, Microsoft kwupụtara na ndị ọrụ nke ọrụ nchekwa igwe ojii ga-enwekwa ike ịhazi ụzọ mkpirisi "Tinye na OneDrive" ha.
Dị ka n'ikike iji pin na mezie ọba akwụkwọ nkekọrịta, njirimara njikwa faịlụ ọhụrụ a ga-adị n'ọnwa na-abịa ma ya, ndị ọrụ ga-enwe ike ibugharị ụzọ mkpirisi ha na nchekwa "Tinye na OneDrive" na folda nzuzo ọ bụla nke kwenyere na OneDrive.
Microsoft ejirila ezigbo mkpọ nke afọ a na-agbakwunye atụmatụ na ọrụ ọhụrụ na OneDrive na ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ ihe ndozi ụlọ ọrụ na-echekwa maka ọrụ nchekwa igwe ojii ya n'afọ na-abịa ka ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite ịkwalite na Windows 11. .
Ịchọrọ ibugharị faịlụ gị na igwe ojii? Lelee mkpokọta igwe ojii kacha mma yana nkwado igwe ojii kacha mma.